चैत ६, २०७५ | काठमाडौ
देशभर फागु पूर्णिमाको उल्लास छाइरहेको छ । चिसोलाई विदाई गर्मीलाई स्वागत गर्दै रंगहरुको पर्वको रुपमा होली मनाइन्छ । आफन्तजन, छरछिमेक, साथीभाई लगायत मिलेर आपसमा रंगमय खुशी साटासाट गरिन्छ । रंगले पार्ने उत्साहजनक प्रभावको पनि ब्याख्या गर्दछ, के बालक के बृद्ध अनि के वयस्क ? होली सबैको चाड हो । यसलाई रंगहरु अनि भातृत्व र साहसको पर्वको रुपमा मनाइन्छ ।
साथीभाईबीच बर्षभरिका यादहरु सँगाल्दै अविर र केसरीको टिका लगाउने चलन छ भने अग्रज पुस्ताले दिएको आशिक पनि छुट्टै महत्व रहन्छ । केही वर्ष अगाडि तराईबासीले मात्रै मनाए तापनि अहिले देशभर मनाइन्छ ।
सद्भाव र मित्रताको प्रतिक मानिने होलीलाई नयाँ पुस्ताले विकृति, विसंगतिको रुपमा लिइएको पाइन्छ । खुशीका नाममा मादक पदार्थ, लागुपदार्थ सेवन गरी उच्छृंखल गतिविधि गरी सामाजिक विकृति फैलाउने गरेको छ । सरकारले यसलाई नियन्त्रण गर्न सुरक्षाकर्मी खटाई होलीलाई मर्यादित बनाउने पहल गरेको छ ।
प्रहरी प्रशासनका अनुसार इच्छा विपरीत होली दल्ने, लोला हान्ने, पानी खन्याउने, अमर्यादित गतिविधि गरेको पाइएमा अभद्र व्यवहार अन्तर्गत कानूनी कारवाही हुनेछ । यस्ता गतिविधि देखिएमा नजिकैको प्रहरी कार्यालयमा अथवा प्रहरीको १०० नम्बरमा फोन गरेर जानकारी दिन समेत आह्वान गरिएको छ ।
७७ वटै जिल्लाले तीन दिन देखि नै होली विशेष सुरक्षा योजना अन्तर्गत प्रचारात्मक कार्यक्रम अघि बढाएको छ । मापसे चेकजाँचदेखि अवाञ्छित गतिविधि निगरानीमा प्रहरी कर्मचारी थपेर सुरक्षा मजबुद बनाइएको प्रशासनले जनाएको छ । यसको लागि सादा पोशकका प्रहरी, घुमुवा प्रहरी र गस्ती टोलीसमेत बढाइएको छ ।
१०७ चेक प्वाइन्ट
प्रहरीले घटना भएपछि नियन्त्रण गर्नुभन्दा घटना हुन नदिनका सचेतना अभियान सञ्चालन गर्न निर्देशन दिएको हो । समुदाय र प्रहरीको संयुक्त अभियान जारी रहेकाले विगतको भन्दा घटना न्यूनीकरण हुने विश्वास गरिएको प्रशासनको भनाइ छ । यसपटक काठमार्डौँमा मात्रै १०७ स्थानमा चेक प्वाइन्ट राखेर होलीलाई शान्तिपूर्ण बनाउने तयारी गरिएको प्रहरीले जनाएको छ।
आज सरकारले पहाड र काठमाडौंमा भोलि तराईमा विदा दिएको छ । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, प्रदेश नं. १ का मुख्यमन्त्री शेरधन राई लगायतले फागु पूर्णिमा (होली) पर्वको शुभकामना दिएका छन् ।
हाम्रो तर्फबाट पनि यस रंगको पर्वले सम्पूर्ण नेपालीमा सुख, शान्ति, समृद्धि एंव उत्तरोत्तर प्रगतिको शुभकामना व्यक्त गर्दछौं ।